Umphandi ubalaselisa ukungasebenzi kakuhle kwe-Apple Security Bounty | IPhone iindaba
Umphandi ubalaselisa ukungasebenzi kakuhle kwe-Apple Security Bounty
Ingelosi Gonzalez | 28/09/2021 22:00 | Izaziso
La khu seleko yeApple ibalulekile, ngakumbi kuthathelwa ingqalelo iingxaki kwiinkampani ezinkulu zetekhnoloji ezingaka ngokulandelelana kosuku. Ngapha koko, ngakumbi nangakumbi sibona ukuba isoftware kunye nezixhobo zekhompyutha ziyancedisana njani ukubonelela ngolwazi oluthe kratya kunye nedatha yobuqu Ezigcinwe ngaphakathi kwesixhobo kwaye hayi kwiinkonzo ze-Apple enkosi kwitekhnoloji enje ngeProsesa ekhuselekileyo ye-Enclave processor. Ukongeza, iApple inenkqubo yomvuzo endaweni yabasebenzisi ababona ubungozi kwiinkqubo zabo zokusebenza: Isixa soKhuseleko ku-Apple. Ngapha koko, umsebenzisi ibonisa ukungoneliseki kwakho ngenkqubo yomvuzo Ingqina ukuba ibithumela ulwazi malunga nobuthathaka obusabonakala kwi-iOS 15 iinyanga.
1 I-Apple Security Bounty: Fumanisa ukuba sesichengeni ngokutshintshiselana ngemali
2 U-Apple uphendula kumphandi emva kweenyanga, emva kokupapashwa kwenqaku lakhe
I-Apple Security Bounty: Fumanisa ukuba sesichengeni ngokutshintshiselana ngemali
Njengenxalenye yokuzibophelela kuka-Apple kukhuseleko, sibavuza abaphandi ababelana nathi ngeengxaki ezinzima kunye neendlela ezisetyenzisiweyo zokuzixhaphaza. Kukuphambili kuthi ukusombulula imiba eqinisekisiweyo ngokukhawuleza ngokukhawuleza ukukhusela abathengi. I-Apple inikezela ukwamkelwa esidlangalaleni kwabo bahambisa iingxelo ezifanelekileyo kwaye bayakuthelekisa imirhumo yokufumana umvuzo kwizibonelelo ezifanelekileyo.
El Intlawulo yeApple yoKhuseleko Yiyo Inkqubo yomvuzo ukuba i-Big Apple yandiswe ngo-2019 ngeenjongo zokuvumela nawuphi na umsebenzisi ukuba athumele ulwazi malunga nalo bugs kunye nokuba sesichengeni kwiinkqubo zokusebenza kwazo. Amabhaso asusela kwi- $ 25000 ukuya kwi- $ XNUMX yezigidi ngokuxhomekeke kubukrakra besichengeni esifunyenweyo.
Izimvo zomphandi uDenis Tokarev kwezakhe blog Ukuba iApple inolwazi malunga nokuba semngciphekweni oku-7 okukhoyo kwi-iOS 3 ngaphezulu kweenyanga ezisixhenxe:
Ndixele ukuba semngciphekweni weentsuku ezi-0 kulo nyaka phakathi kuka-Matshi 10 kunye noMeyi 4, ngoku zintathu zazo zisekhona kuhlobo lwamva nje lwe-iOS (15.0) kwaye enye yalungiswa ngo-14.7, kodwa u-Apple wagqiba kwelokuba ayifihle kwaye angayibandakanyi kuyo kwifayile ye- iphepha lomxholo wokhuseleko.
U-Apple uphendula kumphandi emva kweenyanga, emva kokupapashwa kwenqaku lakhe
Kwinqaku, uTokarev ujongene nokuhlalutya ubuthathaka bobunye kwezi zinto zintathu. Kanye njengoko wacebisa uApple ukuba uyakwenza ntoni xa bengadibani naye. Ezo zeCupertino bezingathobeli ikhontrakthi etyikityiweyo xa kusetyenziswa iBounty yoKhuseleko yeApple. Iiyure emva kokupapashwa kwenqaku Eveza iApple kunye nenkqubo yayo, ukusuka eCupertino badibana nomphandi:
Sibone iposti yakho yebhlog kulo mbandela kunye nezinye iingxelo zakho. Siyaxolisa ngokungalibazisi ukukuphendula.
Sifuna ukukwazisa ukuba sisaphanda le micimbi kunye nendlela esinokuthi siyilungise ngayo ukukhusela abathengi. Enkosi kwakhona ngokuthatha ixesha uxele le micimbi kuthi, siyalubulela uncedo lwakho.
Nceda usazise xa unemibuzo.
Umphandi uyaqhubeka kwaye uqinisekisa ukuba Umyalezo ka-Apple awunangqondo ngakumbi xa ucinga ukuba umsebenzisi ovela kwihlabathi lejele ufumene isisombululo kwezi zenzo zintathu uTokarev wazisa u-Apple ngo-Matshi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Umphandi ubalaselisa ukungasebenzi kakuhle kwe-Apple Security Bounty
Ezona meko ze-Elago ze-iPhone 13 entsha
I-Apple isungula i-iOS 15.1 iBeta 2 kunye nezinye iiBetas zazo zonke izixhobo zayo